Passport & Visa Zvinodiwa Kune vashanyi kuAntigua neBarbuda
Kune vashanyi vekuAntigua neBarbuda zvinotevera zvinoda kupinda zvinoshanda
Vazhinji vagari veEuropean Union (ona runyorwa pazasi) haudi vhiza yekupinda muAntigua neBarbuda pazororo kana bhizinesi. Vanhu vanoshanya vanobvumidzwa kugara chero bhizinesi ravo richitora, chero:
a) izvi hazvipfuure mwedzi mitanhatu
b) vane pasipoti ine iyo inofanirwa kuita kwemwedzi mitanhatu ichitenderwa kubva pazuva ravo rekubva
c) ivo vane onward kana yekudzoka tikiti
d) vane humbowo hwekugara
e) vanogona kuburitsa humbowo hwekukwanisa kwavo kuzvichengetedza muAntigua neBarbuda
VISA / ENTRY ZVINODA KUTI ANTIGUA NEBARBUDA
Iyo visa application kit inogona kubudiswa nekudzvanya pano (PDF - 395Kb).
Kuvhura Times Muvhuro kusvika Chishanu 9.30:5.00 kusvika XNUMXpm. Kugadzwa hakuna kudikanwa. Iyo yekugadzirisa nguva yekuisa vhiza ndeye Mazuva manomwe ekushanda.
Vanyoreri vachaziviswa nezve zuva rekuunganidzira kamwe chete kunyorera kwavo uye zvose zvinyorwa zvinotsigira zvakagamuchirwa uye zvagadziriswa. Ndokumbira utarise, kunonoka mukugadzirisa kunogona kuitika. Nguva dzekugadziriswa dzataurwa dzayedzana uye dzinotadza kuvimbiswa. Hazvizogone kukurumidza kumhan'ara nyaya nekuti munyoreri haana kubvumira nguva yakakwana yekuti chikumbiro chigadzikiswe.
Vanhu vanoda visa re Andiguya neBhabhudha:
(Ndokumbira unyore pasi apa kana simbisa neKomisheni yepamusoro)
Kudzoreredza Visa-yemahara Kusvikira diplomasiti, Gurukota uye / kana Ordinary Passport vane veAntigua neBarbuda
Arubhaniya E Savhadho Lesotho Sendi Vincent neGirenadhini
the national Esitoniya Liechtenstein Samoya*
Ajendina** Fiji Rituaniya San Marino
Arumeniya* Finirendi Rukuzemubhogu Secheres*
Ositiriya Furanzi Macao * Singapowo
Bhahamasi Gambiya Masedhoniya Sirovhakiya
Bhangiradheshi* Georgia Madhagasika Sirovhinyiya
Barbados Jerimani Malawi Zvitsuwa Soromoni*
Bherujiyamu Girisi Marazhiya Chamhembe Afrika
Belize Girinirendi Marudhivhu* Speini
Borivhiya* Grenada Malta Suriname
Bosnia Guatemala Mauritaniya* Sikwazirendi
zimbabwe Gini Bhisau* Morishiyasi Siwidheni
Bhuraziri Guyana Mekisiko Siwizarendi
Bharugeriya Haiti Maikironezhiya Tanzania
Kambodhiya* Hong Kong Mozambiki* Togo
Kepu Vhedhi Hangari Neparo* Trinidhadhi neTobhago
Zvitsuwa Kuku Aisirendi Netharenzi Tunisiya
China India Nikaraguwa Teki
Chile Indonezhiya Nyu Tuvalu
Korombiya Iran ++ Noweyi Uganda
Komorosi* Ayarendi Parau* Ukireni
Kosita Rika Vechiwi Man Panama* Mubatanidzwa wenyika dzeArab Emirates**
Kiroshiya Itari Peru United Kingdom
Kiyuba Jamaika Firipaini Uzbekistan (inoshanda 1st Jan., 2020)
Saipurasi Jodhani* Porendi Vanuatu
Czech Republic Kiribati* Putugaro Guta Vhatikeni
Dhenimaki Korea (North) Kwata Venezuela
Djbouti * Korea (Maodzanyemba) kudzokerana Zambia
Dhominika Kosovo Romaniya zimbabwe
Ripabhuriki Dhominika Rayosi* Rashiya
Ekwadho Rativhiya Sendi Kitsi ne Nevhisi
Ijipita* Rebhanoni* Sendi Rusiya
EBritish Overseas Madunhu
Akotiri naDhekelia Cayman Islands Motserati Vechiwi Man
Angwira Gibhurata St. Helena
Bhemudha Guernsey Turks uye Caicos
British Virgin Islands Jersey Zvitsuwa Pitikeni
French Overseas Madhipatimendi & Mapoka
Nyika yeFrance neAntarctic St. Barth's
muCuraçao St. Maarten
Dzimwe nharaunda dzinovimba neEurope:
Dzimwe Nyika dzisingade ma visa ekupinda muAntigua neBarbuda:
Arubhaniya Azabhaijani Chile
Arumeniya Bharugeriya Japani
Bhuraziri Georgia Liechtenstein
Kiyuba Kijisitani Morodhovha
Kazahkstan Mekisiko Peru
Korea Norway uye Colonies Chammhembe Koria
Monako San Marino Tajikstan
Russian Federation Siwizarendi Ukireni
Suriname Tekimenisitani Venezuela
the national Bherarusi
* Visa rakapihwa pakusvika ++ Visa yakatenderwa painosvika.
** Visa waiver yeDiplomatic uye Official mapasipoti
Zvizvarwa zveNyika izvo zvisingaonekwe pane zvakanyorwa pamusoro, zvinoda vhiza.
Ndokumbira kuti uone kuti vagari vemunyika dzinotevera dzeCommonwealth ikozvino vanoda vhiza yekupinda muAntigua neBarbuda:
Bangladesh, Cameroon, Gambia, Ghana, India, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone neSri Lanka.
Vafambi vengarava yekufamba uyo anowanzoda vhiza hazvaida kuti chero asvika muAntigua neBarbuda mangwanani uye oenda manheru mamwe.
'Intransit 'vafambi vachifamba mukati mezuva rimwe chete, avo vanowanzoda vhiza, havadi vhiza yekupinda muAntigua neBarbuda, chero vaine humbowo hwerwendo rwavo, uye havasiyi 'nzvimbo inodzorwa' yenhandare.
Rugwaro runodikanwa kana uchinyorera vhiza:
Chimiro chekushanda chakakwana.
Anoshanda pasipoti kana gwaro rekufamba rine mvumo yekufambisa kana kuti yekupinda-mvumo yepasirese nyika yaunogona kupihwa tikiti, yakadai seUnited Kingdom (ndapota onai, iyo pasipoti inofanirwa kushanda kwehupenyu hushoma hwemwedzi 6 kubva pazuva rekuuya muAntigua neBarbuda, uye inofanirwa kunge iine imwe yakazara peji peji rekuburitsa vhiza.)
Mufananidzo wazvino wepasipoti yepikicha (45mm x 35mm).
Mari yeVisa: Kupinda kamwechete £ 30.00 Kupinda kwakawanda £ 40.00
Mari chaiyo inokumbirwa kana ikatumirwa mumunhu kuitira kuti usave kunonoka.
Kero yepositi yakaita kuti ibhadharwe kune Andiguya neBhabhudha High Commission (kana ikatumirwa mukati meUnited Kingdom).
Sterling International Money Order (kana application iri kutumirwa kubva kunze kweUnited Kingdom) Mari mirairo inofanira kupihwa mumapaundi. Mari yekurayira mune chero imwe mari ichaita kwete kugamuchirwa.
MABHUKU ANOGADZIRA ASI ANOGONESA
Uchapupu hwerwendo rwakanangana nekupinda nekubuda muAntigua neBarbuda sekuti tikiti kana kusimbiswa kwekubhuka kwako kubva kune wekufambisa mumiriri. Ma visa akawanda ekupinda anongopihwa kune vanonyorera avo vanogadzira humbowo hwezvakawanda zvemukati kupinda Andiguya neBhabhudha.
Hufakazi hwepekugara pakureba kwekugara kana tsamba yekukoka kubva kune wako wekugamuchira. Kune vevadzidzi, ndapota ipaiwo tsamba yekugamuchira kubva kuchikoro chako, uye ruzivo rwekuti uchange uchigara kupi kusati kwatanga zvidzidzo zvako. Kune vamwe vari kufamba bhizinesi, ndapota tambidza tsamba kubva kune waunoshandira ichitaura chinangwa cherwendo rwako.
Nomutsa zvinosanganisira £ 7.00 yekudzosa yakanyoreswa kutumira mukati Europe.
Hufakazi hwemari yekusimbisa mari yerwendo rwacho, semuenzaniso, kubhengi kwemwedzi miviri yakapfuura.
Chinyorwa chemapurisa chinogona kudikanwa kana chakumbirwa nehofisi inopa vhiza.
Ndapota taura ne Antigua neBarbuda High Commission kune chero rumwe ruzivo rwe visa uye zvinodiwa kupinda.